Ikheji yokugcina epholileyo kwifama yaseStaven, eNamdalen. - I-Airbnb
Ikheji yokugcina epholileyo kwifama yaseStaven, eNamdalen.
Ifama sinombuki zindwendwe onguKristin
Wamkelekile ukuba uhlale kwindawo yethu yokugcina ebukekayo ukusuka kwi-1823. Isanda kulungiswa kwaye ihonjiswe ngefanitshala yakudala kwisitayile se-nostalgic. Apha uhlala i-rustic kwaye ilula, kodwa ngeebhedi ezikhululekile. Kwigaraji esecaleni kukho ikhitshi elitsha kunye negumbi lokuhlambela leendwendwe zethu. Thatha uhambo ecaleni kwendlela yenkcubeko ehamba ngaphaya kweyadi, umise ngemyuziyam yethu encinci yasefama kwaye ujabulele ngorhatya kwi-sauna yethu entle eyenziwe ngamaplanga. Apha unamahlathi, iintaba, imilambo kunye namachibi ngaphandle komnyango.
Ifama yaseStaven inendlu enkulu, ishedi, igaraji / indawo yokusebenzela, ikheji yokugcina kunye ne masstu.
Sinezilwanyana ezimnandi nezinentlalontle ethafeni nangaphandle edlelweni. Ukuba unqwenela ukwazi ngobomi basefama, ungavuma ukujoyina ukhathalelo lwasebhadini kusasa okanye ngorhatya. Amathole adinga ubisi kunye nokugonwa kancinci okongeziweyo, iinkomo kufuneka zisengwe kwaye nazo zonke izilwanyana ezinemilenze emine kufuneka zilungiswe kwaye zigcinwe zicocekile kwaye zicocekile. Ikati yasefama kaBilly nayo ingathanda ukutyiswa.
Ifama ibekwe emaphandleni, ekungeneni kuhola wendlela oselunxwemeni phakathi kweSteinkjer neBodø. Kuthatha malunga nemizuzu engama-30 ukuqhuba ukuya kwiidolophu ezikufutshane, iNamsos emantla kunye neSteinkjer emazantsi. Sinendalo entle eninzi kwindawo ekufutshane nefama. Isiqalo esigqibeleleyo sokuhamba emahlathini, ezintabeni, kwimilambo ye-salmon kunye namachibi okuloba. Ebusika, konke okufuneka ukwenze kukubophelela kwikheyiji yokutyibiliza ekhejini kwaye wonwabele umkhondo wokutyibiliza ukuya kuthi ga kwiikhilomitha ezingama-20 ubude. Eyona ntaba iphakamileyo yale lali, iØyenskavlen, imnandi xa unokuhamba intaba.
Kuyenzeka ukuba uthathe uhambo lwemini ngemoto ukuya kwiindawo ezikhangayo ezifana nepaki yentsapho yaseNamsskogan, nge-ferrata kunye nokunyuka e-Flatanger, i-Golden Detour, i-Elvelangs Namsen, indawo yegalufa, iziko le-alpine, ipaki yamanzi, i-go-karting njl. Siyavuya ukunceda ukucwangcisa imisebenzi kunye namava ngelixa ulapha.
Umbuki zindwendwe uhlala kwaye uqhuba ifama, ngoko sidla ngokufumaneka ukuba kukho nantoni na oyifunayo. Jonga www, stavengard.no ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.